အသင်းဟောင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ရမယ့် ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတဲ့ ဒါးဗစ် ဒဟဲယား - xyznews.co
အသင်းဟောင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ရမယ့် ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတဲ့ ဒါးဗစ် ဒဟဲယား
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ မနက်ဖြန် ညမှာ ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်းဆင့် ရှုံးထွက် ပထမ အကျော့ ပွဲစဉ် အဖြစ် စပိန် လာလီဂါ ထိပ်သီး အသင်း ဖြစ်တဲ့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် နဲ့ အဝေးကွင်း ပွဲစဉ်ကို ယှဉ်ပြိုင် ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီပွဲဟာ ယူနိုက်တက် ဂိုးသမား ဒါးဗစ် ဒဟဲယား အတွက်တော့ ထူးကဲလှတဲ့ အမှတ်တရ ပွဲတပွဲ ဖြစ်လာမှာပါ ။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒဟဲယား ဟာ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ရဲ့ ဂိုးသမားဟောင်း တယောက် ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ပါပဲ ။
ဒဟဲယား ဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ကနေ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အချိန်ကတည်းက အခုထိ အသင်းဟောင်းနဲ့ တကြိမ်မှ ပြန်လည် ဆုံတွေ့ခြင်း မရှိခဲ့ ပါဘူး ။
ဒါကြောင့် ဒီပွဲဟာ ၁၁ နှစ်ကာလ အတွင်း ဒဟဲယား ရဲ့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ကို ပထမဆုံး ပြန်ရောက်တဲ့ ပွဲ ဖြစ်လာတော့မှာပါ ။
ဒဟဲယား ဟာ ၂၀၁၅ တုန်းက အေတီကို ရဲ့ မြို့ခံ ပြိုင်ဘက် ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အလွန် နီးစပ် ခဲ့ပေမယ့် ပျက်ပြယ် ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
မက်ဒရစ်မြို့မှာ မွေးဖွား လာခဲ့သူ ဖြစ်ပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ သူဟာ မန်ချက်စတာသား တယောက်လို ဖြစ်နေပါပြီလို့ စပိန်ဂိုးသမား က ထုတ်ဖော်ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
“ကျွန်တော့ကို မက်ဒရစ်မှာ မွေးခဲ့တာဆိုပေမယ့် ဒါက မြို့တမြို့ အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်သွားပါပြီ ။ အခု ကျွန်တော် က မန်ချက်စတာ မှာနေတဲ့ သူတယောက် ၊ မန်ချက်စတာကို ချစ်တဲ့ သူတယောက် ဖြစ်နေပါပြီ ။ ဒီက ဒေသခံ တယောက်လိုမျိုး ခံစား နေမိပါပြီ”
“ဒီကို ရောက်နေတာလည်း နှစ်တွေ အများကြီး ရှိနေပါပြီ ။ ဘ၀ မှာရော ဘောလုံးမှာပါ အနာဂါတ် ကို ကြို မမြင် နိုင်ပါဘူး ၊ ဘာမဆို ဖြစ်သွား နိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကတော့ မန်ချက်စတာ ရဲ့ ဝေးရာကို ထွက်သွားဖို့ မမြင်မိ သေးပါဘူး”
“အခု ကျွန်တော့ကို ဒီကနေ့ ကျွန်တော် ဖြစ်လာမယ့် အခွင့်အရေးကို ပေးခဲ့တဲ့ အိမ်ဟောင်း ကို ပြန်သွား ရပါမယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ စိတ်ထဲမှာ ကစားပွဲ အကြောင်းပဲ ရှိပါတယ် ။ အခြားသူတွေ လိုပဲ ဒီပွဲကို ကစားမယ် ၊ အနိုင်ရအောင် ကြိုးစား သွားပါမယ်”
“အက်သလက်တီကို မှာတုန်းက တတိယ ဦးစားပေး အနေနဲ့ ရှိနေခဲ့ တာပါ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ကိုယ် ကျွန်တော် အမြဲ ယုံကြည်နေခဲ့ ပါတယ် ။ ကျွန်တော် က ငယ်ကောင်းငယ်မယ် ၊ ဒါပေမယ့် ( ပွဲထွက်ဖို့ ) လုံလောက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာ သိနေခဲ့ပါတယ်”
“ကွီကွီး ဆန်ချက် ဖလော်ရက်စ် ( နည်းပြ ) ရောက်လာပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ကျွန်တော့ကို သူ သုံးလာခဲ့ ပါတယ် ။ တရာသီလုံး နီးပါး ကျွန်တော် ကစားခဲ့ရတာပါ ။
ပွဲတွေလည်း အများကြီး နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ယူရိုပါလိဂ် မှာ ဗိုလ်လုပွဲထိ ရောက်တယ် ၊ ဗိုလ်စွဲတယ် ။ ကိုပါဒယ်ရေး လည်း ဖိုင်နယ်ထိ တက်ခဲ့ပါတယ် ၊ ဖလားတော့ မရခဲ့ပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် UEFA Super Cup မှာတော့ အရမ်းကောင်းတဲ့ အင်တာမီလန် ကို ကျွန်တော်တို့ အနိုင် ကစားခဲ့ ပါတယ်”
“အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် အတွက်လည်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းပေး ပါတယ် ။ အခုချိန်မှာ သူတို့နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတာက ကောင်းတာလား ဆိုးတာလား ဆိုတာ မပြောနိုင်ပါဘူး ။ လူတိုင်း ကတော့ အနိုင်ရအောင် ကြိုးစား ကြမှာပါ ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော် ပါပဲ” လို့ ဒဟဲယား က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
Previous Article အက်သလက်တီကို vs မန်ယူနိုက်တက်? ယခုတစ်ပတ် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကို ခန့်မှန်းပေးသွားခဲ့တဲ့ မိုက်ကယ်အိုဝင်
Next Article ဂိုးဖန်တီးမှု နဲ့ ပြန်လာတဲ့ အဲရစ်ဆင် ၊ အခွင့်အရေးမယူနိုင်တဲ့ နာပိုလီ ၊ ဒမ်ဘီလီ ကို ဖျောင်းဖြနေတဲ့ အော်ဘားမီးယန်း တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစာ သတင်းများ